हल्लाको भर नपरौं, नेपालमा अहिलेसम्म कसैलाई कोरोना भेटिएको छैन : डा. झा – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/हल्लाको भर नपरौं, नेपालमा अहिलेसम्म कसैलाई कोरोना भेटिएको छैन : डा. झा
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले नेपालमा आफूहरुले अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणमा कसैलाई पनि कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नभेटिएको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा यो भाईरसको परीक्षण हाम्रो ल्याबमा मात्रै हुन्छ, सुरुमा हामीले पनि यसको नमूना परीक्षण हङकङ पठाएका थियौं । त्यतिबेला हामीलाई ठूलो क्रिटिसिजम पनि भयो । तर, अहिले हामी आफैंले परीक्षण सुरु गरिसकेका छौं ।
भारतमा जारी हिराे ‘आई लिग’ मा किरण चेम्जाेङ ‘म्यान अफ् द म्याच’